1. Chii chakakosha pakubheka Inopa hukuru hwakajeka hwevara Uyezve wedzera kutapira kune iyo yakakwana kuravira Ishuga yakakwira Asi unotenda izvozvo here Nzira yekugadzira icing ndiani angadai akafunga kuti zvaive nyore, uye iwe unogona kutora zvese zvishandiso zvaunazvo mumba mako, mukicheni, zvishandise kumisikidza makeke ako zvakanaka uye kuvaita kuti vadade nazvo. Icho chiitiko chaicho chakagadzirwa. Kuti muyedzo wemufaro kana chero munhu arikutsvaga imwe mari kubva kubheka. Ngatizviitei kudzikisa mutengo panguva imwe chete zvirinani.
2. Chii chinonzi icing shuga? Chaizvoizvo shuga yanga iri kuburikidza nekugaya kwakanaka maitiro. Chitarisiko chena upfu Inenge inenge 3% yezviyo uye inoshandiswa sechinhu chekukochekera zvinhu zvakabikwa. Iyo watermark yakanaka isina chero zvisimbiso zvakasara. Ichowo musanganiswa wekirimu kushongedza keke, madonati uye kugadzira zvidhori zvekushongedza madhiri acho zvakakwana. Zvinotonyanya kukosha, zviri nyore kuzviita wega, zvichibatsira kudzikisa mutengo wekutenga zvigadzirwa. Zviri nyore kuwana, zviri nyore kugadzira nezvinosanganisira zvinotevera:
3. Iko kune chete 3 zvigadzirwa izvo zvinogona kuwanikwa mune yega yega imba mukugadzira icing shuga: 150 magiramu eshuga.
4. Per magiramu gumi nerimwe echibage starch uye blender
5. Kutanga kubva pashuga. Dururira mu blender Uye zvino kutenderera zvakakwana Nekushandisa nguva yekutenderera, kwete yakareba, anenge 20-30 masekondi
6. • Wotarisa kuti shuga yakasanganiswa yakanaka here kana kuti kwete. Kana kuchine chero pellets, tora utorezve. Kusvikira yanaka, inoita kunge hupfu hushoma. • Kana shuga yakanyatso sanganiswa. Wobva wawedzera chibage muzvikamu zvataurwa pamusoro apa. • Ipapo shuga nechibage zvosanganiswa pamwechete. Sanganisa zvese zvinoshandiswa pamwe chete kwemaminitsi gumi.
7. • Tarisa uone kuti zvinhu zvacho zvasangana zvakanaka nehupfu hwakatsetseka. Izvo zvapera. Wobva wachengetwa mumudziyo wakavharidzirwa. Kuti ushandise zviri nyore
8. Wedzera kutapira uye kudziya kubva kugadzirwa kwemukati icing. Nekuti chikafu chine chekuita nekusarudzwa kwezvakanaka zvigadzirwa Kana isu tichigona kuburitsa mbishi zvinhu Kana kunyorerwa kuchikafu chatakagadzira pamba Kuwedzera pakuve neyakasiyana kuravira Ziva mavambo acho Izvo zvinobatsira mukuderedza mutengo nekuti icho chinhu chinogona kuwanikwa kutenderedza iwo mutambo wekubheka. Ngatiitei icing shuga Shongedza makeke kana mapeke pachavo Rega vanhu vanodya vazive kutapira kwatinofarira kuita izvozvo Zvakavanzwa nerudo, hanya uye kudziya Mune mamorekuru ese e candy iyo majasi akashongedzwa zvakanaka Kana kukoka vana kuti vagadzire zvidhori uye vagadzire makeke zvese zviitiko zvinogadzira ndangariro. Uye kunyemwerera kumhuri zvakare Kupfuura kutapira kunonaka